Ch 13 Luke – 2kalluunka
Home / Kitaabka Quduuska ah / Injiilka Luukos / Ch 13 Luke
13:1 Waxaa joogay, wakhtigaas aad u, qaar ka mid ah, kuwaas oo warbixinta ku saabsan dadkii Galili, dhiig oo Bilaatos ayaa ku daray allabarigooda.
13:2 Iyo wax ka qabashada, Wuxuu iyaga ku yidhi: "Ma waxaad u malaynaysaa in kuwii reer Galili waa dembaabnay badan reer Galili oo dhan kale, sababtoo ah waxay dhibaatooyin aad u badan?
13:3 No, Waxaan idinku leeyahay,. Laakiin haddaanad toobad keenin, aad oo dhan la mid ah way baabbi'i doontaa.
13:4 Oo kuwii siddeed iyo toban korkiisa oo munaaradda Siloo'am iyaga ku dhacay oo ku dhintay, ha idinla tahay, inay sidoo kale ay ahaayeen kuwa xadgudba ka sii badan tahay dadkii Yeruusaalem degganaa?
13:5 No, Waxaan idinku leeyahay,. Laakiin haddii aadan toobad, aad oo dhan doonaa halligmi la mid ah. "
13:6 Oo isna wuxuu sidoo kale sheegay masaalkan: "Nin baa wuxuu lahaa geed berde ah oo, kaas oo lagu canabka ahayd lagu beeray. Oo isna wuxuu u yimid isagoo midho ka doonaya on, laakiin waxba ma ay helin.
13:7 Markaasuu ku yidhi cultivator beerta canabka ah: Bal eeg, Waayo, kuwaas oo saddex sannadood ah aanan ka yimid midho ka doonaya lahaa geed berde ah, oo kama aan helin. Sidaa darteed, jari. Waayo, bal waa in xitaa mashquulin dalkii?'
13:8 Laakiin in jawaab, wuxuu ku yidhi isagii: Sayidow, hana noqdo this sidoo kale sanadkii, intii lagu jiray waqtigaas waxaan hareerihiisa qodqodo oo dar bacrimin.
13:9 Markaasay, dhab ahaan, waa in midho u dhali. Haddii Laakiin ma, mustaqbalka, hoos aad u gooyn doonaa. '"
13:11 Oo bal eeg, there was a woman who had a spirit of infirmity for eighteen years. And she was bent over; and she was unable to look upwards at all.
13:12 And when Jesus saw her, he called her to himself, oo wuxuu iyada ku yidhi, "Naag, you are released from your infirmity.”
13:14 Markaasuu, iyada oo sababtu tahay, the ruler of the synagogue became angry that Jesus had cured on the Sabbath, and he said to the crowd: “There are six days on which you ought to work. Sidaa darteed, come and be cured on those, and not on the day of the Sabbath.”
13:16 Sidaas daraaddeed, should not this daughter of Abraham, whom Satan has bound for lo these eighteen years, be released from this restraint on the day of the Sabbath?"
13:18 Oo sidaas daraaddeed ayuu yiri: "Si aad waxa weeye boqortooyadii Ilaah la mid ah, iyo waxa ay tiradaasi u ekaysiiyaa?
13:19 Waxay u eg tahay iniin khardal, tan uu nin qaaday oo beertiisii ​​ku riday. Oo iyana way kortay, oo waxay noqotay geed weyn, iyo haadda hawada u nasteen laamihiisa. "
13:20 Oo haddana, ayuu yiri: "Ilaa tirada ekaysiiyaa boqortooyada Ilaah?
13:21 Waxay u eg tahay khamiir, oo qof dumar ah oo waday oo ay saddex qiyaasood oo bur wanaagsan oo sarreen ah, ilaa maalintii la gebi khamiireen. "
13:22 Oo isna wuxuu la Tegay magaalooyinka iyo tuulooyinka dhex, barayay oo jidkiisa samaynta Yeruusaalem.
13:23 Oo qof wuxuu ku yidhi, "Lord, iyagu waa yar yihiin kuwa badbaadayaa?"Laakiin wuxuu iyagii ku yidhi:
13:24 "Dadaala inaad geli Iridda cidhiidhsan. Waayo, kuwo badan, Waxaan idinku leeyahay,, ayaa dooni doona inay galaan, mana awoodaan.
13:25 Markaasuu, marka aabbe u ahaa qoyska ay galeen doonaa markaasay albaabkii xidheen, bilaabi doontaan inaad dibadda istaagtaan oo aad albaabka garaacdaan ah, oo wuxuu ku yidhi, Sayidow, noo furo. 'Oo jawaab, isna wuxuu ku odhan doonaa inaad, 'Anigu garan maayo Halkee ka timid. "
13:26 Markaasaad bilaabi doontaan inaad tidhaahdaan, Ayaannu wax ku cuni jirnay oo ku cabbi hortiinna, oo idiin baray jidadkayaga. '
13:27 Oo wuxuu odhan doonaa inaad: 'Anigu garan maayo Halkee ka timid. iga taga, kuwa xumaanta ka shaqeeya oo dhan aad!'
13:28 In meeshaas, waxaa jiri doonta baroor iyo ilko jirriqsi, marka aad aragtaan Ibraahim, iyo Isxaaq, iyo Yacquub, iyo nebiyada oo dhan, boqortooyada Ilaah, weli Naftiinna laga xanibo aad ka baxsan.
13:29 Oo iyana waxay ku imaan doontaa Bari, iyo West ah, iyo Waqooyiga, iyo Koonfurta; oo waxay ku dangiigsan miiska ee boqortooyada Ilaah.
13:30 Oo bal eeg, kuwa ugu dambeeya ayaa ugu horrayn doona, iyo kuwa ugu horreeyaana way ugu dambayn doonaan. "
13:31 Oo isla maalintaas, Farrisiintii qaarkood oo soo dhawaaday, isaga ku leh: "Taga, oo halkan ka tagaan. Waayo, Herodos baa dooni inuu idinka dilaan. "
13:32 Oo isna wuxuu ku yidhi iyagii: "Tag oo dawacaas u sheega: Bal eeg, Ayaan jinniyo saarayaa oo dhammayn bogsiiyo, maanta iyo berri. Oo anigu waxaan maalintii saddexaad dhamaadka gaadho. "
13:33 Oo weliba sida runta ah, waxaa lagama maarmaan ah igu dhex socodsiiyey maanta iyo berri iyo maalinta ku xigtaba. Waayo, ma uusan ku dhicin in nebi inuu ku dhinto Yeruusaalem ka baxsan.
13:34 Yeruusaalem, Yeruusaalem! Waxaad u Dila Nabiyada, oo aad dhagax kuwa loo soo diray si aad u. Daily, Waxaan doonayay inaan soo wada ururiyo carruurtaada, si la mid ah shimbir buulkeeda la baalasheeda hoostooda, aad, laakiin way diideen!
13:35 Bal eeg, gurigaaga waa laga tegi doonaa cidla idiin. Laakiin waxaan idinku leeyahay, inaydnaan idinku i arki doonaan, ilaa ay dhacdo in aad tidhaahdaan: Waxaa barakaysan kan ayaa gaaray Rabbiga magiciisa ku yahay. '"